हिट र रन शनिबार! | Martech Zone
शनिबार, अक्टोबर 21, 2006 शनिबार, अक्टोबर 21, 2006 Douglas Karr
मँ मेरी छोरीलाई उसको आमाको लागि आज मोम्मी-छोरी साताको अन्त्यमा पुगें। राउन्ड-ट्रिप, ड्राइभ करीव २ घण्टा हुन्छ। म मेरो घर फर्किरहेको करिब एक माइल यात्रा गर्दै थिएँ जब मेरो अगाडि एउटा हल्का पिक-अप ट्रक मेरो सामु रहेको कारमा उसको टुक्रिदै गरेको देखे ... र त्यसपछि उनले उछिने! म दुबै छक्क र वास्तवमा रिसाएको थिएँ त्यसैले म उनको पछि गएँ र मेरो सेल फोनमा2911 बुलाए। हामीले करिब miles माईल उत्तरतिर यात्रा गर्यौं र उनले ध्यान दिए कि म उनको पछि लागिरहेको थिएँ र ग्यास स्टेशनमा तानिएँ।
उनीसँग भएको ड्राइभर र केटा मेरो विन्डोमा हिंडे र मैले तिनीहरूलाई पछ्याउँदैछु भनेर सोधें। मैले भने ... "उह, हो" ... उनी भन्छिन्, "किन, मैले तपाईंलाई हिर्काइनँ !?"
म यसलाई विश्वास गर्न सक्दिन !!! त्यसैले मैले उनलाई चुप लागेर बस्न भने र म पुलिससँग फोनमा थिएँ (मैले उनीहरूलाई सम्पूर्ण समय दिशाहरू दिइरहेको थिएँ)। उनी थोरै टिक गरीन् र भनिन् "म यहाँ छु" र उनी आफ्नो ट्रकमा छिर्छिन्। मैले त्यो केटीलाई हेरें जुन उनी उनीसंग बिन्ती गर्दै थिई, उसलाई थाँहा थियो कि उनीहरू समस्यामा थिए। मैले उनलाई थाहा पाइन कि म उनी पछाडि हुन चाहन्छु :)।
त्यसोभए तिनीहरू ट्रकमा फर्किए र मलाई लाग्छ कि उनीहरू दुर्घटनातर्फ फर्किए तर यसमा अलिकति ढिला भयो। केहि माईल तल सडक पुलिस अवरुद्ध थियो। मैले वास्तवमा पुलिसले भनेको सुनेँ कि सडकमा उभिएकी उनलाई तल ओर्लदै थियो र उसले मलाई यसो भन्दै सुन्न सक्थ्यो, "हे ... ती ती हुन्!"
दुर्भाग्यवश, एक गरीब बच्चा ब्राण्ड नयाँ मुस्टang ड्राइभ गर्दै यी सबैको बिचमा पक्राउ पर्‍यो र महिला रोकिनु भन्दा ठीक अघि पुलिसको गाडीमा ताल्चा लगायो (अँ, दोस्रो दुर्घटना!)। मैले माथि तानें र मेरो सबै जानकारी दिएँ।
त्यसपश्चात, म मूल दुर्घटनामा फर्किए जहाँ गरिब केटी मारियो। उनी वास्तवमै डराए तर उनको परिवारले मलाई ड्राइभर तल ट्र्याक गर्नको लागि राम्रो चेयर दिए।
मैले यो किन गरेको तपाईं बताउन सक्नुहुन्न… तर म छक्क परें कि म मात्र एक थिएँ। यो दुर्भाग्यवस दोस्रो पटक हो जब मैले अपराध देखेको छु र अरू कसैलाई अगाडि बढेको देखेको छैन। त्यो साँच्चिकै डरलाग्दो छ। यदि कसैले अपराध गरेको बेलामा केहि गर्‍यो भने, मलाई पक्का विश्वास छ कि अपराधको दरहरू उल्लेखनीय रूपले तल झर्नेछ। यो दुर्घटनाले धेरै व्यक्तिलाई असर गर्यो! हिर्काएको ती गरिब केटी, पुलिसको गाडीमा ठिटो ठोक्ने केटा, जेल गएकी महिला, उनका साथीले मलाई भने कि उसले उनलाई रोक्न भन्यो ... सबैका लागि के शनिवार छ।
यो माथि देखि जब यो केहि यस्तो हुन्छ ले धेरै लिदैन। कसैले मलाई एकपटक भन्यो कि यसले विशेष व्यक्ति लिन्छ ... म सहमत छैन। म कर्माको ठूलो प्रशंसक हुँ ... यदि तपाई अर्कै तरिकाले हेर्नुभयो भने, सम्भावना यो छ कि जब कोही मद्दतको आवश्यक्ता भएको बेला कसैले टाढाबाट हेर्नेछ।
उत्पादन व्यवस्थापनको ad घातक गल्तीहरू
धन्यबाद, सीन ... म नायक होइन, कुनै मार्केटिंग मोगल छैन ... तर यसले मलाई अरू कसैलाई चोट पुर्याएको देखेर पागल भयो र फेरि बाहिर निस्किहालें। धन्यवाद सबैजना ठीकठाक थिए, म पक्का छु कि नतीजा अझ नराम्रो हुन सक्छ।
अक्टूबर २०, २०१ at २:22० अपराह्न
डग, महान मार्केटिंग अंतर्दृष्टि, तर तपाईंको नायक कहानी धेरै बाध्यकारी थियो र साहस लिनुभयो। मँ खुसी छु तिमीलाई गोली लागेन, म कुक काउन्टी, IL मा बस्छु। धेरै व्यक्तिले कुनै मतलब गर्दैनन्, मलाई गर्व छ म कसलाई गर्ने भनेर जान्दछु।